Momba anay - Shenzhen Comled Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen Comled Electronic Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2011, any Shenzhen, mandrakotra faritra maherin'ny 2,000 metatra toradroa miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 50.Taorian'ny 10 taona mahery nisian'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana, ny Comled Technology dia lasa mpanamboatra matihanina matihanina amin'ny sehatry ny indostria sy mpivarotra jiro jiro.
Comled Teknolojia dia mpanamboatra matihanina izay mifantoka amin'ny nitarika Linear jiro vokatra sy ny vahaolana ho an'ny eran-tany Linear jiro fixture mpampiasa, natokana amin'ny famolavolana, famokarana sy ny fivarotana LED batten mety ho folo taona.Ny fivoaran'ny orinasa dia mifantoka amin'ny lafiny manaraka: Smart Energy Saving, High Luminous Efficacy, Emergency Battery Back-up, Quick Installation, Easy Maintenance.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fiara fijanonana, trano fanatobiana entana, metro, tonelina, ambanin'ny tany andalan-teny, tohatra tsara, lalantsara, orinasa, fivarotana lehibe, gara sy ny sisa.
Mpanjifa serivisy lehibe: Mpandraharaha injeniera, Mpanome serivisy elektrika, mpivarotra ambongadiny, Distributor, tsenambarotra ary mpivarotra hafa amin'ny LED Linear Luminaire.
Faritra fivarotana lehibe: Etazonia, Kanada, Royaume-Uni, Frantsa, Alemana, Aostralia sy ny sisa.
Amin'ny maha-iray amin'ireo matihanina LED etona porofo fixture mpanamboatra, dia nanangana ny fikarohana sy ny fampandrosoana Departemantan'ny izay mifantoka amin'ny ID famolavolana, rafitra famolavolana, elektronika faritra famolavolana sy ny fitsapana.Nahazo traikefa sy fahaizana manankarena izahay amin'ny fanomezana serivisy OEM & ODM avy amin'ny fepetra samihafa.Toy ny: famolavolana jiro CAD, fonosana namboarina, watts namboarina, sensor mikraoba mikraoba, back-up bateria maika na fepetra hafa namboarina.Ny orinasanay dia voamarina amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001.Ny ankamaroan'ny vokatray dia famolavolana patanty, ankatoavin'ny CE, SAA, C-tick, LVD, EMC, IEC, LM80, RoHS, ETL.Nanangana vokatra sy tsipika iray manontolo izahay, anisan'izany ny fitaovana SMT, milina fandoroana, milina fanontam-pirinty tamin'ny laser, mpizara PCB, mpanandrana avo lenta, milina fitsapana fahanterana, champer fitsapana hafanana ambany, spektrum tester sns.Izany rehetra izany dia manome antoka fa afaka manolotra mpanjifa ny kalitao tsara indrindra sy ny vokatra azo antoka.